Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विभिन्न कार्यक्रम गरि गाईजात्रा पर्व मनाईयो – Emountain TV
काठमाडौं, ३१ साउन । गाईजात्रा पर्व काठमाडौं उपत्यकासहित केही जिल्लामा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । विशेष गरी नेवारी समुदायमा आफ्ना दिवंगत पितृहरुको उद्दार गर्ने सन्दर्भमा गाईको जात्रा गरेर यो पर्व मनाइन्छ । तर आजभोली भने गाईजात्राको परिभाषा फरक हुन थालेको छ । समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई हास्य व्यंग्यमार्फत उजागर गर्ने गरिन्छ ।
श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, अर्थात् गाईजात्रा पर्व । राजा प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रवर्तेन्द्रको नाबालक अवस्थामै मृत्यु हँदा आफ्नी रानीलाई सम्झाउनका लागि चालेको एक कदमबाट यो पर्वको शुरुवात भएको मानिन्छ । गाईजात्रा पर्वका दिन एक युवकलाई प्रतिकात्मक गाई बनाएर दिवंगत आफन्तको सम्झनामा गाजाबाजासहित नगर परिक्रम गरी मनाइने गरिन्छ ।
गाइजात्रामा अचेल समाजमा भएका बिकृति बिसंगतीप्रति प्रहार गर्ने पनि गरिन्छ । आजभोलि गाईजात्राका अवसरमा समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति उजागर गरिन्छ । सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जनात्मक तथा व्यंग्यात्मक ढंगले विविध कार्यक्रमको आयोजनासमेत हुन्छ ।
व्यवस्थाप्रति व्यंग्य गरेको भन्दै २०१७ पुस १ गतेको शाही शासन आएपछि गाईजात्रामा पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो । तर २०३३ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महोत्सवका रुपमा झाँकी र हास्य व्यंग्यसहित गाईजात्रा फेरि मनाउन थालेको हो । हास्यव्यंग्य कलाकारहरुले बुझ पचाएर जथाभावी गर्नेलाई सचेत गराउने र अनर्थकतामा सार्थकता झल्काउन गाइजात्रा पर्वले सहयोग पु¥याउने कलाकारहरुको भनाइ छ ।
गाइजात्रापर्वमा नेपालका नेताहरुलाई पनि व्यंग्यको माध्यमबाट देश निर्माणमा लाग्न बिकृति बिसंतीलाई हटाउन यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएपनि देशको हालत झनझन बिग्रदै गएको उनीहरुले बताए । हरेक बर्ष गाइजात्रामा व्यग्य गरेपनि नेताहरु भने नसुध्रिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय गाइजात्रापर्वमा बिशेष गरि विकृति, विसंगति र नेपालको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक विषयमा तिखो व्यङ्गय प्रहार, समाज सेवाका नाममा हुने ठगी, भ्रष्ट्राचार आदिमा व्यग्य प्रहार गर्न यो पर्व परिभाषित हुदै गएको छ । तर स्वतन्त्रताको नाममा जसलाई जेपायो त्यो भनेर गाइजात्राको नाममा बिकृति भित्रिएको प्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
शून्य लागतमा मलेसिया जान सुरु, मलेसियालीबराबरकै ज्याला र सुविधा